Seafood soup | ThermoRecipes
Uyu muto wegungwa Ndinozviita zvakanyanya kumba. Hove dzinoita sedzangu kuve chikafu chine hutano kune iyo Kudya kwevakuru nevana. Zvangu ndakazvidya zvisingaite muto kubvira zvaive zvidiki. Mumwe wavo wavanofarira mitambo ndeyekusveta chirlas uye kubata "iyo bug" sezvavanotaura.
Ndinofanira kubvuma kuti kumba kwedu tiri chaizvo tureen, kunyanya vasikana neni. Izvi ndinofunga zvakagara nhaka kubva kuna amai vangu, nekuti chero nguva muto kana muto unovabatsira, zvisinei nemwaka wegore watiri.
Iyi sopu yegungwa ndeye zvakati netsei yeiyo peeling prawns kugadzira yakanaka stock. Asi mhedzisiro yacho inogutsa zana muzana nekuda kwekuravira kwayo.
Iyi ndiyo imwe nzira yekubvisa iyo inogona kutorwa na celiac uye gluten isingashiviriri sezvo isingatore chero mhando yepasta kana chingwa.
Nesobho yegungwa iri uchava nekosi yekutanga yakakodzera chero mhemberero.
Nguva yekugadzirira: 10M
Kubika nguva: 42M
Nguva yakazara: 52M
200 g yemapunga emupunga
250 g yechirlas
500 g yemvura (yeiyo stock)
2 yekutakura steaks
1 diki bhero bhero mhiripiri
1 diki tsvuku bhero mhiripiri
200 g yematomatisi akapwanyika chaiwo
700 g yemvura (yeiyo stock)
50 g mafuta omuorivhi
Chinhu chekutanga chatinoita kuchenesa chirlas nekuisa mumudziyo nemvura nemunyu. Ipapo tinosvuura matinji.
Tinochengetedza miviri uye tinowedzera makomba mugirazi pamwe nemvura. Isu tinoronga Maminitsi mashanu, kumhanya 5, tembiricha yevaroma.
Dzvinyirira sosi uye chengetedza muto.
Mugirazi tinowedzera gariki uye hanyanisi, tichiapwanya Masekonzi mashanu pakumhanya 5.
Wedzera mhiripiri uye madomasi uye sanganisa Masekondi makumi matatu nekumhanyisa 12.
Wedzera mafuta uye fry, Maminetsi manomwe, tembiricha yevaroma, kumhanya 6.
Ipapo tinowedzera mvura, munyu, mhiripiri, stock neka bay bay. Isu tinoisa Maminitsi mashanu, kumhanya 15, tembiricha yevaroma.
Zvichakadaro, isu tinosuka chirlas zvakanaka ndokuisa munzvimbo yepazasi yevaroma mudziyo.
Tinoputira mazai mufirimu yakajeka uye tinoaisa pamwe chete nechairi.
Muchikamu chepamusoro chevaroma tinoisa zvakarongedzwa fletan fillets.
Pakupera kwenguva isu tinoisa iyo varoma mudziyo pagirazi uye chirongwa cheimwe Maminetsi manomwe, tembiricha yevaroma, kumhanya 15.
Pakupedzisira, tinoisa mitumbi ye shrimp muhari uye toirega ichizorora kwechinguva chidiki.
Isu tinoshambira muto uyu pamwe nechairi, hove dzakatemwa uye nezvidimbu zvemazai kushongedza ndiro.
Mamwe mashoko - Hove kutenderera
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Celiac, Zvokudya zvegungwa, Navidad, Hove, Soup uye mafuta
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Zvokudya zvegungwa » Seafood soup
luis ezequiel olaya muñoz akadaro
Sopu iya yakanaka chete, inogocha sei?
Pindura kuna luis ezequiel olaya muñoz
Ndiyo muto wangu wandinofarira, ndinoda hove dzegungwa. Tevedza nhanho dzese dzeresipi uye iwe uchaona kuti iwe unoshamiswa sei nehupfumi hwayo.
Inotaridzika kunge yakanaka, chokwadi ndinodaro. Unongova mubvunzo mumwe chete, unoisa riini ma noodles, nekuti mumufananidzo mune maoodles, handiti?
Mhoro Lola, ndinoigadzira nemupunga uye ndinowedzera nezve 60 gr. nguva pfupi usati wagadzira maminetsi gumi nemashanu ekupedzisira. Kana iwe ukawedzera manoodles, kana aya maminetsi gumi nemashanu ekupedzisira aprindwa, iwe unowedzera kana kwasara maminitsi gumi kana gumi Ndinovimba unozvifarira.
usashandise halibut ihozi inogadzirwa nehove
Joaquin rega nditaure chimwe chinhu chakakosha kwazvo kwauri. Unokwenenzvera nhumbi nepanga. Iyo fletan kana inozivikanwawo se halibut hove chena-ine mafuta chena iyo inobatwa hove kuchamhembe kweAtlantic, nepo panga iri hove yemvura yakachena inokwidzwa muMekong Rwizi rweVietnam uye OCU yakapa zano kuti isadya iyo pamwe chete necheriki nekuti iine zvisaririra zvemushonga wezvipembenene nemekiyuri (europapress chinyorwa che4 / 03/2010).
Ini ndiri mutsva kune iyi thermomix, baba vangu vangondipa iyo. NeMugovera ndine vanhu vekudya kwemanheru uye ndingafarire kugadzira muto wehove wekutanga, chinhu choga chandisinganzwisise chaizvo mashandiro anogadzirwa nemaprawn kana tikazviwedzera pazororo ... aya ndiwo maitiro avanoitwa pa zvese ?????
Ndatenda uye makorokoto, iwe unobatsira kwazvo
Noelia, isu tinowedzera iyo prawns kumagumo yekuzorora sezvaunotaura uye nemaminetsi mashoma eiyo yakanyanya tembiricha ivo vanoitwa kuti varege. Eya, mupunga matanga madiki kwazvo uye haadi chimwe chinhu. Ichokwadi kubuda kukuru uye idhishi rinodiwa nemunhu wese. Uchandiudza sei.
Inofanirwa kuve inonaka asi ndinoda kuti undipe kamukira kepaella kuti ndiigadzire mu thermomix kunyangwe dai yanga isina kukwana zvakakwana nemidziyo yese asi chimwe chinhu chakafanana neicho ndingafarire chaizvo kukwazisa.
Marimar, ndiyo nzira yatinofanira kutsikisa. Mumazuva mashoma anotevera tichaiisa. Shuwiro yakanakisa.
Mhoro kune vanhu vangani vane izvi zvigadzirwa?
Pindura kuna Nesa
Mhoro Nesa, yekutangisa kwevanhu vatanhatu yakakwana. Kutenda nekutinyorera!
olaaa Ndinoda nezveresipi iyi asi ndine kusahadzika kwakati, chii ichocho pamusoro penzvimbo dzekutakura zvinhu uye mvura (yechitoro) .Kukwazisa.
Hauna kutumira posta paresipi here? Ndinotarisira mhinduro yako kana zvisiri, kuti uone kana uchikwanisa kunditsanangurira kana wakambozviita mu thermomix nzira yekuzviita nayo nekutenda kwaziso
Mhoro Marimar, isu tine chokwadi chekuchipfeka mushure mekisimusi, ikozvino isu tave takabatanidzwa nezvikafu zveKisimusi. Tipeiwo mazuva mashoma, ndapota. Shuwiro yakanakisa.
Kutenda kwakawanda uye regerera zvinonetsa
Ndine kuda paella, regai tione kana uchikwanisa kuiturika munguva pfupi, maita basa musikana.Ichishuwo chikuru chekuyedza mu thermomix.
Mhoroi, ndine yako yekudya yegungwa muto uye ndinonzwisisa zvese zvakanaka
Chete kana ndasvika padanho rekuisa mazai uye mafirita ekutakura andinotenga cazon handizive kuti ndozviita sei muvaroma ini handina chekuparadzanisa nekudzika ndapota ndibatsireiwo
Conchi, ndeupi muenzaniso we thermomix waunayo? kunyangwe mu tm-21 ndingangopika kuti varoma vane tray yekugona kuisa uriri huviri asi ndichave nechokwadi.
Ndiri kuzozvigadzirira manheru ano. Izvo zvakakurudzirwa kwandiri neangu wandaishanda naye uye ndinofara kuti ndawana peji rako nekuti pano unozvitsanangudza zvirinani pane mubhuku. Ikoko zvakange zvisina kujekerwa kwandiri kana chirlas yaifanira kubikwa nemvura uye munyu, kana kungogezwa.
Kana iri halibut, ndinobvumirana naJoaquín: ine chepfu. Hake zvirinani.
Mar ndatenda nemupiro wako wehalibut tichazvifunga. Kwaziso
Manheru akanaka Silvia akanyorera kwauri kuitira kuti iwe ugone kundiudza kuti vanhu vangani vegungwa muto wekubikisa ndewe
Ndakazviita manheru eKisimusi asi ini ndakawedzera hutsi
asi ndoda kuti undiudze kuvanhu vasere sei zviyero
Conchi, ndinowanzova nevanhu vatanhatu kana vasere vane muto uyu, asi kana zvikaita sezvakanyanya kupfupika, unogona kuwedzera zvishoma, asi ramba uchifunga kuti hapana anopfuura ma6 litres anopinda mu thermomix.
Ndinovimba unoifarira, Mar. Iyo muto wakapfuma kwazvo. Ndatenda zvikuru nekutiona. Kwaziso uye Kisimusi yakanaka!.
Mhoro Mar, ndagadzira muto musi weKisimusi uye maiwe zvangu
Ini handina kubhururuka, tora monkfish muswe pasina munzwa uye yaive yakanakisa kugamuchirwa, amai vangu
Mhoroi Conchi, chokwadi ndechekuti kwandiri ndeimwe yemasobho akagadziriswa eKisimusi. Iyo yakanakisa uye ndinoifarirawo ne monkfish. Kwaziso uye Kufara 2011!
Mhoroi apo! Kuti ndiite hafu yemari yacho, ndinocheka zvese zvinoshandiswa muhafu, asi ndichichengeta nguva nekumhanya? Ndatenda zvikuru vasikana!
Hongu Elena, unocheka zvigadzirwa muhafu asi pamwe chete nenguva uye nekumhanya.
Kutenda neresipi yechikafu chegungwa, ndiri kuzozviita paEvha yeGore Nyowani kune ingangoita mhuri yangu yese, ini ndinokuudza mhedzisiro, ndatenda, fambai.
Hi Jose, ndinovimba unoifarira. Ndiri kuzozviitira Zuva reGore Idzva. Isu tese tinoda muto uyu. Kwaziso uye Kufara 2011!
Ndinokutendai zvikuru pamabikirwo enyu, ndinonyatsoda mablog enyu ndichagadzira muto wako wezvokudya zvegungwa pakupera kwegore uye ndichauperekedza nechimwe chinhu chidiki chandakaona kunze uko, kutsvoda kwakasimba uye HAPPY GORE ITSVA
Pindura kune maricarmen
Goredzva Rakanaka, Mari Carmen!. Ndinovimba unoifarira uye ndinokutendai zvikuru nekutitarisa. Kutsvoda.
Ndakaigadzirira Evha yeKisimusi uye takaifarira zvakanyanya, ini ndinoipa kupfuura gumi
Ndatenda zvikuru, Paco. Ndiri kufara kuti wakazvifarira. Shuwiro yakanakisa.
Mangwanani akanaka. PaMakore Matsva Evha ndiri kuenda kunogadzira muto uyu, asi mazuva mashoma ndisati ndazviita kuti ndiongorore kuti zvaive sei. Mhedzisiro yacho yaive yakanaka kwazvo asi kwekuravira kwangu, kana ndikawedzera zvese sisitimu yakanyanyisa kuravira. Iwe unowedzera zvese here? Ino nguva ini ndichaedza kuwedzera imwe shoma mvura uye kwete kuisa yese stock. Nenzira yekuti ndinofanira kugadzira muto makumi maviri. Ini ndanga ndafunga nezvekugadzira iyi yekubheka katatu uye nekuisa zvese pamwe chete mu tureen, asi kana iwe uine chero hunyengeri hwekuchengetedza nguva ndingafarire. Kwaziso uye kufara gore idzva
Marga ichokwadi kuti stock dzimwe nguva yakanyanyisa kukoshesa uye iwe unogona kuwedzera mvura uye nekudaro iwe une mamwe mashoma emanheru. Mukutungamira kwevakawanda, ndingaite kanokwana katatu sekutaura kwako.
Kwazisai uye Mazororo Anofadza !!
Mhoroi vanhu vese zvakare, zvakanaka, muto wezvokudya zvegungwa wakabudirira, ndakawedzera chilli kuti ndiibate zvine hukasha, nekuti ndaifunga kuti yainge isipo.Ndatenda uye ndichamirira iyo paella recipe, ramba uchiita basa rakanaka bye.
Hi Jose, ndinofara kuti wakazvifarira uye chokwadi ndechekuti kubata kwechilli kwakakwana. Kwazisai uye ndinovimba kuti tichakurumidza kuisa kamukira kepaella.
Ndinofanira kukuudza kuti kwandiri iyi ndiyo imwe yemasobho akanakisa andati ndambove nawo, ndakaigadzira mushure mekudya kwemanheru uye takaidya zuva raitevera! Ndakashamiswa nekuravira, ndiyo yaive yekutanga sopu yandaigadzira neiyo thermomix uye ini handina kufunga kuti yaive neiyo yakasimba yegungwa kuravira! Kukuudza kuti kunyangwe mukomana wangu akazvitora (haafarire masobho zvachose) uye akatondiudza kuti ndichazvidzokorora riinhi! lol
Ndinewe Irene, kwandiri ndiyo sosi yakanakisa yandati ndambove neiyo thermomix. Ndiri kufara kuti unozvifarira. Shuwiro yakanakisa
Mhoroi, ndakazviita svondo rapfuura, ichi chikuru chinonaka zvinonaka, makorokoto.
Ndinozvida. Ndiyo muto wandinofarira. Ndiri kufara kuti unozvifarira. Shuwiro yakanakisa
Mhoro nezuro manheru, ndagadzira muto uyu kuti udye nhasi, asi ini ndakafunga kuti waitaridzika kunge wakanaka uye tanga takananga kudya kwemanheru (sezvo paive nevatatu vedu, ndichiri kuzosara ndichidya nhasi). Izvo zvakanaka kwazvo, ini, pachinzvimbo chekuwedzera hove mafirita, ndakaisa madiki squid, (ayo ari manyoro), uye zvaive zvakanaka. Pamusoro peplate yemwanakomana wangu, ini ndakawedzera salmon filet yandaive nayo kuti adye kudya kwemanheru, ndakaipwanya mundiro yake, iye ndokudya kwemanheru kwakanakisa. ! aizvida! uye ndiro chete pamusoro. Hahaha.
Chokwadi ndechekuti kumba ndiwo muto watinofarira. Vanasikana vangu vanozvidya izvo zvakanaka. Zano rakanaka kwazvo pamusoro pecalamari, ini ndichazviedza nguva inotevera. Shuwiro yakanakisa
charo sanz solera akadaro
Ndinokukorokotedzai nemabikirwo ese zvakawandisa, sezvo ini pandakawana peji rako tese tinofara. Kunyanya, muto wegungwa wandakatogadzira kakati wandei, uye kunyanya murume wangu akauda. Unoita basa rakanaka chose. WAITA HAKO.
Pindura kuna charo sanz solera
Mhoro Silvia! Makorokoto pane peji, ini ndangova neiyo thermomix kwemazuva mashanu, uye ini ndiri kuenda zvishoma zvishoma zvishoma .., kusahadzika kwangu paunoti isu tinoisa stock uye tinochengeta muto .., iwe unorevei neizvozvo? inoiswa mugirazi? Ndatenda
Maite, zvandiri kutaura ndezvekuti isu "tinoomesa" stock, uye tochengeta muto unobva mukupfuura masheya nemusefa kuitira kuti pasave negoko re shrimp.
Ah, hongu Silvia, ichokwadi .., ndakanga ndisina kuverenga nemazvo .., ndatenda zvikuru!
Sopu iyi inonaka kwazvo, takanga tadya nayo nezuro uye yainyatso kubudirira! zvinoitwa nenguva diki-diki. Ndiri kushamiswa neiyo thermomix yavakandiudza nezvazvo uye ndakafunga zvakanaka kuti zvaisazove zvakashata asi izvozvi zvandava nazvo ndinoona kuti ndeyezvakawanda !!!!! kwaziso
Ndakagadzira muto wezvokudya zvegungwa uye zvave zvakanaka kwazvo ndagara ndichizvitya nekuda kwekushata kwazvinoita asi zvinoitwa munguva diki uye zvakanyatsonaka mumba mangu makazvifarira, ndatenda
Mibvunzo miviri ndapota |
-Unowedzera manodles mangani? Uye ndinoita sei kuti ndiite kanokwana katatu iyo mari nekuti tese tiri makumi maviri pakudya, ndinogona kuzviisa pamwechete muhari inopisa mushure mekugadzira kana ndinofanira kumirira kuti itonhorere? .
Mhoroi Susana, pandinoda huwandu hwakawanda mune mamwe mabikirwo, zvandinoita ini ndinovagadzira kanoverengeka sekureva kweresipi ndobva ndaiisa muhari, uye ndinoipa kupisa kwekupedzisira.
Gadzirira muto uyu manheru eKisimusi, zuva rapfuura ndisati ndaedza uye ndakaida, handina kukwanisa kutenda kuti yaive yakapfuma sei uye kuti handidye muto, murume wangu aizvidawo. Chokwadi ndechekuti mangwana acho zvaive zvisina kufanana, handizive zvakaitika, yaive ichiri yakapfuma asi munhu wese akabvuma kuti yaive yakasimba kwazvo, kuti yaive nemhiripiri yakawandisa, handinzwisise masobho saka handidi kuziva kuti chaive chii, asi ichokwadi kuti ini ndaisaziva pamwe nezuro wacho, chingave chii? mhiripiri maviri chii chinowedzerwa? munhu wese akataura kuti ndaifanira kuyedza kuigadzira ndisina mhiripiri, iyo yaisiya yakasimba kwazvo. Ndatenda kwazvo kune iyo blog, ndeimwe yezvakanakisa zvinhu pa internet. Goredzva Rakanaka!
Pepitos kana xuxos nekirimu
Gungwa mabass nemunyu